भारतमाथि ऐतिहासिक जितमा नायक बनेका पाकिस्तानका पाँच खेलाडी | Hamro Khelkud
एजेन्सी – पाकिस्तानले आइतबार राती टि२० विश्वकपमा क्रिकेटको पावर हाउस भारतलाई १० विकेटले हराउँदै इतिहास रचेको छ । विश्वकप इतिहासमा पाकिस्तानले पहिलो पटक भारतलाई हराउन सफल भएको हो । आइसिसी टि२० विश्वकप २०२१ सुपर १२ को समूह बी मा रहेको पाकिस्तानले पहिलो खेलमै भारतमाथि जितका साथ सानदार सुरुवात गरेको छ ।
आइतबार ब्याटिङ र बलिङ दुबैमा पाकिस्तान हाबी बन्यो । दुबई इन्टरनेशल क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ थालेको भारतले निर्धारित २० ओभरमा ७ विकेटको क्षतिमा १ सय ५१ रन बनाएको थियो । भारतका कप्तान विराट कोहलीले ४९ बलमा ५ चौका र १ छक्का सहित सर्वाधिक ५७ रनको योगदान दिए । पाकिस्तानका तीव्र गतिका युवा बलर शाहिन शाह अफ्रिदीले ४ ओभरमा ३१ रन खर्चेर सर्वाधिक ३ विकेट लिए । अफ्रिदी खेलको मुख्य नायक हुन् ।
जितका लागि १ सय ५२ रनको विजयी लक्ष्य पछ्याएको पाकिस्तानले १७.५ ओभरमा कुनै पनि विकेट नगुमाई पूरा गर्यो । ओपनर मोहम्मद रिजवान ५५ बलमा ६ चौका र ३ छक्का सहित ७९ रनमा अविजित रहे । कप्तान बाबर आजम ५२ बलमा ६ चौका र २ छक्का सहित ६८ रनमा अविजित रहे ।
पछिल्लो समय उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आएका यी दुई ओपनरले आफ्नो लयलाई निरन्तरता दिएपछि पाकिस्तानले सहज जित निकालेको थियो । यसअघि पाकिस्तानले भारतसँग टि२० र एकदिवसिय विश्वकप कुनैपनि खेलमा जित हात पार्न सकेको थिएन । टि२० विश्वकपमा पाँच पटक प्रतिस्पर्धा गर्दा पाँचै पटक पराजित भएको थियो । एकदिवसिय विश्वकपमा ७ खेलमा ७ मानै पराजित भएको थियो ।
२००७ को विश्वकपमा समूह चरणमा पाकिस्तान भारतसँग बराबर भएपछि बल आउट (बलले स्टम्प ताक्ने) आधारमा पराजित भएको थियो । २००७ को फाइनलमा पाकिस्तान ५ रनले भारतसँग पराजित हुन पुगेको थियो । पाकिस्तानले बाबर आजमको कप्तानीमा आइतबार भारतविरुद्ध विश्वकपमा हारको खडेरी तोडेको हो । अव मंगलबार पाकिस्तानले न्युजिल्यान्डसँग खेल्नेछ । उक्त खेल थप रोमाञ्चक हुने अनुमान गरिएको छ । भारतलाई हराउन नायक बनेका पाकिस्तानका पाँच खेलाडीको प्रदर्शन छोटकरीमा ।
स्पिनर शादब खानले ४ ओभरमा मात्र २२ रन खर्चेर १ विकेट लिएका थिए । शादब खानले मध्यक्रममा ९ बल डट राख्दै दबाब बढाएका थिए । भारतले खराब सुरुवात गरेपनि विराट कोहली र ऋषभ पन्तले चौथो विकेटका लागि ५३ रनको साझेदारी गर्दै खेलमा फर्काउन खोजेका थिए । युवा विकेटकिपर ऋषभ पन्त आक्रामक ब्याटिङ गर्दै भारतलाई बलियो योगफलको सम्भावना देखाएका थिए । पन्त क्रिजमा अरु समय टिकेको भए भारतले बलियो योगफल बनाउन सक्थ्यो ।
किनकी पन्त विष्फोटक र ठूला इनिङका लागि चिनिन्छन् । शादबले १३ औं ओभरको दोस्रो बलमा पन्तलाई ३९ रनमा कट एण्ड बोल्ड आउट गर्दै पाकिस्तानलाई महत्वपूर्ण सफलता दिलाएका थिए । पन्तले ३० बलमा २ चौका र २ छक्का प्रहार गरे । पन्त आउट भएपछि कोहलीलाई थप दबाब परेको थियो । शादबले सहि समयमा पन्तको विकेट लिएका थिए । उपकप्तान समेत रहेका शादबले पाकिस्तानलाई पहिलो जित दिलाउन महत्वपूर्ण योगदान दिए ।
४. हसन अली
तीव्र गतिका बलर हसन अलीले भारतका दुई विकेट लिएका थिए । हसनले ४ ओभरमा ४४ रन खर्चेर २ विकेट लिए । भारतले खराब सुरुवात गर्नेक्रममा ओपनर लोकेश राहुललाई ३ र रोहित शर्मालाई गोल्डेन डक गुमाएको थियो । तर ब्याटिङमा भारतको गहिराई छ । सूर्यकुमार यादव भारतका अर्का भरपर्दा युवा स्टार क्रिकेटर हुन् ।
तर हसन अलीले छैटौं ओभरको चौथो बलमा सूर्यलाई ११ रनमा रिजवानबाट क्याच गराएका थिए । सूर्यले एक्लै खेललाई मोड्न सक्छन् । तर पाकिस्तानसँग खेलमा एज लागेर क्याच हुन पुगे । हसनले १८ औं ओभरको पाँचौं बलमा रविन्द्र जडेजालाई १३ रनमा क्याच गराए । भारतले खराब सुरुवात भएपनि अन्त्यको लागि राम्रो वातावरण बनाएको थियो । जडेजा ठूलो सट खेल्नेक्रममा डीप मिडविकेटमा समातिन पुगेका थिए । हसन २०१७ को च्याम्पियन्स ट्रफी फाइनलमा भारतलाई १ सय ८० रनले हराउदा पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए ।
३. मोहम्मद रिजवान
विकेटकिपर तथा ओपनर मोहम्मद रिजवानले पाकिस्तानको जितमा सानदार प्रदर्शन गरे । पछिल्लो समय रिजावन उच्च लयमा छन् । त्यो लयलाई भारतविरुद्ध पनि निरन्तरता दिए । रिजवान ५५ बलमा ६ चौका र ३ छक्का सहित ७९ रनमा अविजित रहे । उनले बाबर आजमलाई राम्रो साथ दिँदै १० विकेटको जित सम्भव बनाएका थिए । यी दुई मध्य एकको विकेट गुम्दा पनि पाकिस्तान समस्यामा पर्न सक्थ्यो ।
पाकिस्तानको ब्याटिङ शीर्ष तीन ब्याटरमा बढी निर्भर रहँदै आएको छ । लक्ष्य मध्यम भएपनि विश्व स्तरिय भारतीय बलिङ आक्रामण सामू सुरुवाती समय विकेट नदिई खेल्न पक्कै सहज थिएन । रिजवानले पहिलो ओभरको दोस्रो बलमै भुवनेश्वर कुमारलाई चौका र तेस्रो बलमा छक्का प्रहार गरेका थिए । त्यसले पनि मनोबल थप उच्च भएको थियो । त्यसपछि दुबै ओपनर सानदार साझेदारीका साथ खेल जिताए । रिजवानले १८ औं ओभरको पहिलो बलमा मोहम्मद शामीलाई छक्का, दोस्रो र तेस्रो बलमा चौका प्रहार गर्दै १० विकेटको जित पक्का गराए । रिजवानको परिपक्क ब्याटिङमा पाकिस्तानले भारतलाई पहिलो पटक हराउन सफल भयो ।
२. बाबर आजम
पाकिस्तानको जितमा बाबरको प्रदर्शन र कप्तानी दुबै उत्कृष्ट रह्यो । क्लासले भरिपूर्ण ब्याटर बाबरले ५२ बलमा ६ चौका र २ छक्का सहित ६८ रनको अविजित इनिङ खेले । बाबरले खेलमा संयमित, आक्रमक र क्लास सबै देखाए । बाबर कभर डाइभको लागि विश्व प्रसिद्ध ब्याटर हुन् । पाकिस्तानलाई ४८ बलमा ६७ रन चाहिँएको थियो ।
१३ औं ओभरमा स्पिनर बरुण चक्रवर्तीलाई दुई सानदार छक्का प्रहार गर्दै जित सहज बनाएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज र प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आएका बाबरले विश्वकपमा भारतविरुद्ध पनि निरन्तरता दिए । भारत र पाकिस्तानबीचको खेलमा कुनैपनि खेलाडीलाई सहज हुँदैन । अझ कप्तानमाथि बढी दबाब हुने गर्दछ । तर बाबरले दबाबमा उत्कृष्ट प्रदर्शनका साथ इतिहास रचाए ।
१. शाहिन शाह अफ्रिदी
बायाँ हाते तीव्र गतिका बलर शाहिन शाह अफ्रिदी भारतलाई हराउन नायक बनेका पाकिस्तानका प्रमुख खेलाडी हुन् । अफ्रिदीले कुनैपनि समय भारतीय ब्याटरलाई ठूलो योगफलको बारे सोच्न दिएनन् । अफ्रिदीले पहिलो ओभरको चौथो बलमै ओपनर रोहित शर्मालाई एलबीडब्लू आउट गर्दै गोल्डेन डक आउट गरेका थिए । योर्कर बलमा रोहित शून्यमा आउट भएपछि भारत सुरुवातमै दबाबमा परेको थियो ।
तेस्रो ओभरको पहिलो बलमै अर्का ओपनर लोकेश राहुललाई ३ रनमा बोल्ड आउट गर्दै पाकिस्तानलाई उत्कृष्ट सुरुवात दिलाएका थिए । कुनैपनि टोलीले पहिला पावर प्लेमा दुबै ओपनर गुमाउँछ भने जित कठिन हुने गर्दछ । भारतका दुबै ओपनर प्रमुख ब्याटर थिए । त्यसपछि भारतले पूरै खेलमा संघर्ष गर्नुपर्यो । कोहलीले क्रिजम जम्दै भारतलाई केहि आशा देखाएका थिए ।
१९ औं ओभरको चौथो बलमा कोहली पनि रिजवानबाट क्याच आउट भएका थिए । टि२० विश्वकपमा पाकिस्तानविरुद्ध यसअघि कोहली आउट भएका थिएनन् । कोहली आक्रामक ब्याटिङ गर्ने समयमा आउट भएका थिए । अफ्रिदीले ४ ओभरमा ३१ रन खर्चेर प्रमुख ३ विकेट लिँदै भारतलाई मध्यम योगफलमा रोकेका थिए । अफ्रिदीनै खेलको प्लेयर अफ द म्याच चुनिए ।